Meherkii Ugu Martida Badnaa Oo Lagu Qabtay Masjidka Cali Mataan Iyo Farriintii Bulshadda Looga Diray - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Meherkii Ugu Martida Badnaa Oo Lagu Qabtay Masjidka Cali Mataan Iyo Farriintii...
Meherkii ugu martida badnaa, ayaa shalay lagu qabtay masjidka Cali Mataan ee magaaladda Hargeysa, kadib markii la tukuday salaadii Jimcaha, waxaana gabogabadii bulshadda looga diray farriin culus oo la xidhiidha sidii loo fududeyn lahaa guurka.
Sheekh Maxamed Aadan ayaa markii uu soo dhammeeyay khudbaddii salaada Jimcaha, waxaa uu sheegay in marka la tukudo isla goobta lagu qabanayo meher tusaale u noqda guurka oo aanay ku baxeyn wax kharash ah iyada oo jamacii tukanayay noqonayaan ka soo qeybgaleyaasha.
Sheekha ayaa kaga dhawaaqay masjidka magacyada lammaanaha la isku nikaaxayo iyada oo uu goob-joog ahaa inanta aabaheed oo u wakiiishay sheekh Maxamed Aadan iyo ninka loo meherinayo oo ahaa Maxamed Caddaani Yuusuf.
Sheekha Maxamed oo oggolaanshaha labada dhinac heysta ayaa halkaasi isugu meheriyay lammaanahan oo kala ahaa Maxamed Caddaani Yuusuf iyo Ikraan Axmed Cabdi.
Waxa kale oo uu sheekhu ka sheegay halkaasi qaddarka meherka oo ahaa konton garaam oo ah dahabka nooca 21.
Sheekh Maxamed Aadan ayaa ku tilmaamay inuu yahay kulankii ugu kheyrka badnaa ee lammaane la iskugu meheriyo, waxaana halkaasi ka dhacay sacab xoog leh oo muujinayay sida ay dadku u taageersan yihiin meherkaasi.
Bulshada ayaa si xoog leh uga cabata guurka qaaliyoobay oo loo tiriyo lacagta badan ee lagu bixiyo xafladaha lagu qabto huteellada ee lagu magacaabo gabaatiga iyo yaradka, taas oo lagu tilmaamo in ay qeyb weyn ka tahay waxyaabaha yareeyay guurka.Kharashka ku baxa xafladaha meherka ayaa mararka qaarkood ka badan ta dambe guri dhiska.
Masaajidka Cali Mataan